Tselatra · Mey, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Mey, 2008
Oktobra 2008 29 Lahatsoratra
Septambra 2008 27 Lahatsoratra
Aogositra 2008 40 Lahatsoratra
Jolay 2008 56 Lahatsoratra
Jona 2008 13 Lahatsoratra
Mey 2008 19 Lahatsoratra
Avrily 2008 52 Lahatsoratra
Marsa 2008 28 Lahatsoratra
Janoary 2008 62 Lahatsoratra
Septambra 2007 6 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Mey, 2008
Ny feo manaiky fankahalana vahiny
“Ireo mpanao politika malaza nigoka ny fiarovan'ny vahoaka mozambikana ary efa lasa mpitarika na mpandraharaha amin'izao fotoana izao, nahoana moa izy ireo no tsy manandratra ny feony hiaro ny Mozambikana tsy ho tratran'ny fankahalana vahiny ary hanakana ireo mpanatanteraka (ny herisetra)?”, hoy ny fanontanian'i Bosse Hammarström [pt].
Mpanoratra Paula Góes Nandika Andriamifidisoa Zo
25 Mey 2008
Afrika Atsimo: inona ny dikan'ny teny hoe makwerekwere?
Soritsoritan'i Khanya ny niandohan'ny voambolana hoe “makwerekwere,” tenin-jatovo ho an'ny vahiny any Afrika Atsimo: Mpamaham-bolongana roa liana amin'ny teny sy fiteny ny mitady ny dika sy nipoiran'ny teny hoe “makwerekwere”. Tenin-jatovo ho an'ny vahiny izany, indrindra ireo niditra antsokosoko, ary fampiasako amin'ny lahatsoratra hanoherana ny herisetram-pankahalana nitranga nandritra ny roa volana farany.
Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Andriamifidisoa Zo
Arzantina: Tsy masaka izany fiaran-dalamby haingam-pandeha izany
Efa vonona ny soritr'asa fampitohizana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha ny tanànan'i Buenos Aires sy Rosario ary Córdboa izay mitentina 4 miliara dollars ety ampanombohana. Manolotra lisitra lavabe ny antony ilazany fa hevitra tsy masaka io soritr'asa io ary hanimba vondron'olona maro isan-kazarany. [es]
Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Andriamifidisoa Zo
18 Mey 2008
Manangona ny vaovao nandritra ny herinandro i Ny Mpandinika Armeniana (The Armenian Observer) ary milazalaza ny heviny ihany koa. Efa nampoizina ihany ny lohahevitra nibahana tamin'ny fampahalalam-baovao fa ny toe-draharaha taorian'ny fifidianana, ny tena nifantohan-dresaka tamin'ny vaovao tao an-toerana moa dia nirona tamin'ny adin'izy mirahalahy nitondra voalohany ny firenena fa tsy ilay vao voafidy sy ilay mpifaninana aminy loatra.
Mpanoratra Onnik Krikorian Nandika Andriamifidisoa Zo
Afrika: Vaovao momba ny lamaody afrikana
Vaovan-damaody afrikana Ladybrille: “Angom-baovaon-damaody mivoaka isan-kerinandro miresaka momba an'i Afrika na avy eto Afrika. Vaovao misongadina vitsivitsy tamin'ity herinandro ity: a) Mikarakara ny herinandron'ny lamaody voalohany indrindra miaraka amin'ny herinandron'ny Lamaody Coca-cola Accra i Ghana; b) Mamolavola fifandraisana amin'i Azia i Afrika Atsimo, Mikasa hanao seho any Nizeria ilay mpamoron-damaody Nizeriana mipetraka any Afrika Atsimo Fred Eboka ary efa ho hipoka tanteraka ny any Johannesburg renivohitry ny Lamaody Afrikana Tatsimo!”
14 Mey 2008
Libanona: Miverina amin'ny fisamatsamahana ara-pivavahana
“Terena matetika, tsy araka ny sitrapony, indray ankehitriny ny olona, hiverina amin'ny fisamatsamahana ara-pivavahana misy azy ho fiarovan-tena. Mahavaky fo ny tsirairay matetika ny fiantraikan'io fisamatsamahana io,” hoy ny soratry Manuela Paraipan miresaka amin'izay iainany mandritra ny fifanandrinana mitranga any Libanona.
Mpanoratra Moussa Bashir Nandika Andriamifidisoa Zo
Robert Mackey no manoratra ao amin'ny the New York Times’ The Lede momba “ny ‘Feon'i Rosia Ankehitriny'” – sy ny feon'ny filoha Dmitry Medvedev nandritra ny lanonam-panokafana: “[…] George Watts, ilay mpanentana teraka Kanadiana izay nifindra tany amin'ny Firaisana Sovietika tamin'ny taona 1952 niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Talohan'ny naharava ny komonisma dia niasa tao amin'ny sampan-draharahan'ny teny vahiny tao amin'ny Radio Moskoa Atoa Watts ary matetika koa no nandika teny teo ho eo, izany no nolazainy ao amin'ny tantaram-piainany ofisialy ao amin'ny Rosia ankehitriny, ary tafiditra amin'izany ihany koa ny niasany ho feo amin'ny teny anglisin'i Nikita Khrushchev sy i Leonid Brezhnev nandritra ireny kogresy ofisialiin'ny antoko ireny.”
Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika Andriamifidisoa Zo
12 Mey 2008
Libanona: Fahavaratra mafana
“Andro mafana mahafinaritra indrindra eto Libanona… nivadika ho ady an-trano ny filaharam-pihetsiketsehana… matahotra aho. Omaly raha nandre ny tifitra nifamaliana mihamanakaiky ny trano aho dia tsy sahy nitsangana, tsy sahy nihazakazaka, tsy afa-nihetsika akory aza!!” Hoy i NightS raha nanoratra izay niainany nandritra ny zava-nitranga farany tany Libanona izy.
11 Mey 2008
Libanona: Foibe TV hitsangana voaroba
“Nitomany araka izay tratry ny heriko aho raha nandre fa tandindonin-doza ny tanàna ravan'i(vohitra haolo) Baalbek. Tsy mampivarahontsana ihany fa mahatsiravina ihany koa, toa hoe potika tanteraka avokoa ny tahirin-kevitra, tahirintsary (tahiry 18 taona) ary tahirom-peon'ny foibem-pampielezantsary (TV) iray vao saiky hisokatra!” voasoratry Mirvat momba ny fahapotehana trano fampielezan-tsary iray.
Libanona: tsy mifankahazo ny resaka
“…fifandraisana tsara aro tany amin'ny tany tsy azo idiran'ny olona hafa ary nanampy ny mpitolona niady tamin'ny miaramila Isiraeliana niaraka tamin'ny fitaovany harifomba nandritra adin'ny fahavaratra 2006 ilay fifandraisandavitra ifaneraseran'ny Hezbollah manokana niteraka ny fifanandrinana farany teo” hoy ny GPC nilaza ny anton'ny ady mitranga ankehitriny any Libanona.
10 Mey 2008
Afrika: Ny fanamby miandry ny fivavahana any Afrika Atsinanana
Miresaka ny amin'ny “PFanambin'ny fivavahana isan-kazarany any Afrika Atsinanana,” andian-dahatsary ao amin'ny YouTube i Pea: “vao avy nijery YouTube aho izao ary nanaraka andian-dahatsary mitondra ny lohateny hoe “Ny fanambin'ny fiavahana isan-karazany any Afrika Atsinanana.” Navoakan'ny ACFAR, izay inoako fa fanafohezan-tenin'ny African Centre for Apologetics Research (Ivotoeram-pikarohana Afrikana misahana ny fiarovana ny fivavahana arahina) io andian-dahatsary io. Tsapako fa ampy ahy ny nijereko azy nandritra ny roa minitra voalohany, saingy mba hialako amin'ny resaka fanombatombanana fotsiny dia nanapa-kevitra aho ny hijery azy hatramin'ny farany..”
Afrika Atsimo : Vonona hiatrika ny 2010 ve i Afrika Atsimo, izay mankahala mpiavy ?
“Vonona hiatrika ny 2010 ve i Afrika Atsimo, izay mankahala mpiavy ?“, hoy i Bomseh, mpitoraka blaogy avy any Kenya – monina ao Afrika Atsimo. “Manaitra ary toa tsy mampino ny mahita ny fivoaran'ny fanafihana ireo vahiny ao Johannesburg sy ny faritra manodidina ao amin'ny faritanin'i Gauteng. Mihanaka tahaka ny doro tanety ny habibiana vokatry ny fankahalana, tahaka ny nitranga tao Kenya tsy ela akory izay ; amin'izao fotoana izao dia mananika ny 100 ireo mpiavy maty noho io korontana io, anjatony hafa no naratra ary maro no nifindra toerana.”
Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Pissoa
21 Mey 2008
Libanona: Mifaneke na mifindrà toerana
“Teny an-dalana mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Beirota no nitenenan'ny mpikamban'ny ‘Fivondronan'ny Sembana’ sy ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana tamin'ny mpanao politika, tompondakan'ny ady (Seigneurs de la guerre), ny be fihetsiketsehana sy ny akamany ny tsy hiverenenany any an-toerana mihitsy raha mbola tsy milamina ny resaka ka vita misy ny fifanarahana,” izany no tenin'ny mpiara-misakafo zoma atoandro (Friday Lunch Club) momba ny Olobe Libaney manao tapatapak'ahitra momba ny fandriapahalemana tontosaina any Qatar.
Iran: Aostralia sy ny filoha Iraniana
Niteny i Anthony Lowenstein fa “eo ampakana hevitra” hahazoana mitory ny filoha Iraniana Mahmoud Ahmadinejad ankehitriny ny lehiben'ny fampanoavana Robert McClelland,ao Aostralia, noho ny resany mikasika ny “fandravana” an'Isiraely. Mizara ny heviny mikasika izany tantara izany i Anthony.
Mpanoratra Fred Petrossian Nandika Andriamifidisoa Zo
Libanona: ady ivelan'ny fisamatsamahana ara-pivavahana
“Nanasongadina ny fisarahana politika lalina izay mihoatra (ambadiky) ny fisamatsamahana ara-pivavahana ny tenin'i Nasrallah, Fa misy ny mihevitra an'i Libanona ho toeram-pamaharan'ny tandrefana hanjakazakana ao amin'ny faritra izay mifanohitra amin'ireo mahita an'i Iran sy Siria ho atidohan'ny fiokoana,” hoy ny soratry Burghol miresaka ny ady any Libanona.
Fanehoan-kevitra iray ao amin'ny A Fistful of Euros‘ mikasika ny fifidianana Serba: “Tsy nisy nanampo ny valim-pifidianana saingy hoy aho hoe misy hafatra tian-kampitain'ireo mpifidy araka ny fijery serba milaza fa tsy voatery hanaiky ny fahaleovantenan'i Kosovo vao tafiditra ao amin'ny Vondrona Eoropeana.” I Mark Mardell ao amin'ny BBC moa manaraka ny fifidianana ao amin'ny Euroblog – eto, eto ary eto. I Eric Gordy indray manaraka ny fifidianana ao amin'ny East Ethnia – eto, eto, eto ary eto. Manoratra i Gray Falcon fa “ny lala-tokana hahazoan'ny Demôkiraty fandresena amin'ny fifidianana dia ny fahfaha-mandingana ilay kajikajy milaza fa tsy ho azony ny maro an'isa ahafahana manangana governemanta.” Hoy ny mpamaham-bolongana Greater Surbiton ao amin'ny ny antoko radikaly Serba – sy ao amin'ny voka-pifidianana santatra hoe: “[…] Nametraka fanavahana tsara ity fifidianana ity satria na dia banga aza ny fanekena an'i Kosovo, dia voailika ihany koa ny fikororosi-fahana mankany amin'ny fitiavan-tanindrazana mihoa-pefy. […]”
Libanona: Didy hitsivolan'ny governemanta noravana
“Nanambara ny famerenana an'Atoa Wafiq Shuqair ho lehiben'ny fiarovana ny seranam-piaramanidina indray KOmandin'ny tafika ary izy no hiandraikitra ny fanadihadiana momba ny seraseram-pifandraisan'ny Hezbollah ‘nefa tsy ho voakitika ny momba ny fitolomana (resistance)’, hiangavy ny mitam-piadiana rehetra hiala amin'izay ka hosokafana amin'izay ny lalana rehetra,” hoy ny tatitry In the Middle of the East (eo anivon'ny atsinanana) momba ny fanapahan-kevitry ny governemanta niteraka ny disadisa tany Libanona.
Libanona: Toy ny voafahirano
“Mipetraka eto Ras El-Nabeh aho, izay tena nampahery vaika ny fifandonana nandritra ny roa andro farany teo, ary isaorana andriamanitra fa efa mihamiverina ny filaminana ary efa voafehin'ny tafika libaney ny toe-draharaha. Na izany aza anefa dia mbola tsy niasa aho noho ny tahotra fandrao tsy ho tafaverina an-trano eo! Eny e, toy ny mbola anaty fahirano ny tena e!” hoy Rami.
Cap Vert: momba ny vola Euro ho vola fampiasa any an-toerana
Mandanjalanja ny hevitry ny mpanohana sy ny mpanohitra amin'ny fanaovana ny Euro ho vola manankery miasa any Cap Vert i Virgílio Brandão [pt]. “Tsy maintsy heverin'ny firenena ny ho endrikendriky ny vahaolana teraka avy amin'ny fanapahan-kevitra noraisina ary ny tombony no tokony ho betsaka fa tsy ny fahasarotana. Dia ho ankasitrahan'ny olona izany”.
Ireo pejinay momba an i Tselatra
Lahatsoratra fohy miaty rohy, na sary